यसरी घरमै बनाउनुस् मुखै रसाउने पानीपुरी
अनलाइन पत्र संवाददाता प्रकाशित मिति १८ चैत्र २०७६, मंगलवार १०:४१
पानीपुरी भनेपछि थप ब्याख्या गरिरहनु नपर्ला । धेरैलाई पानी पुरी स्वादीलो लग्न सक्छ । घर बाहिर पानीपुरी खानुभन्दा त घरमै पानी पुरी बनाएर खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो ।
आज हामी तपाईहरुलाई आफ्नै घरमा स्वादिलो र स्वस्थ पानीपुरी बनाउने तरिकाबारे जानकारी गराउदैछौ ।
पानीपुरी बनाउको लागि सुरुमा त पानीपुरीको पुरी बनाउनु पर्छ । त्यसको लागि एकदमै सजिलो उपाय छ ।
दुइसय ग्राम मैदामा दुई सय ग्रामनै सुजि राख्नुहोस । त्यसमा हल्का नुन राख्नुहोस । नुनकै हाराहारीमा बेसन पाउडर राख्नुहोस । भाँडोमा तयार भएको मैदा, सुजि, बेसन पाउडर र नुनलाई राम्रोसँग घोल्नुहोस । अनि विस्तारै थोरै–थोरै गरेर पानी राख्दै मुछ्दै जानुहोस । दुइतीन मिनेट मुछेपछि त्यो तयार हुन्छ । पिठो सुख्खा रोटी बनाउने पिठो जत्तिकै साह्रो बनाउनुहोस ।
कस्तो गज्जब है ! स्वादीष्ट पानी पुरि बनाएर खानुहोस । हामीले दिएको बिधी कस्तो लाग्यो ?
यो बिधि साथीहरुसँग पनि बाड्नुहोस ।
आज मिति २०७६ चैत १८ गते मंगलवार, तपाईको आजको राशिफल हेर्नुहोस्